Nosy sy morontsiraka Kambodza: ​​Kep, Koh Tonsay ary Sihanoukville | Vaovao momba ny dia
Nosy sy morontsiraka Kambodza: ​​Kep, Koh Tonsay ary Sihanoukville
Mariela Carril | | Kambodza, nosy, Fitsangatsanganana any Azia
Amin'ny faran'ny iray amin'ny saikinosy Indochina dia Kambodza, firenena kely tsara tarehy any Azia atsimo atsinanana. Firenena misy olona marobe mipetraka, ny ankamaroan'ny bodista ary manana kolontsaina lehibe sy manankarena. Fa ankoatry ny kolontsaina taloha dia i Kambodza dia tompon'ny torapasika miavaka.
Misy toerana roa any Kambodza izay tena mpizaha tany sy be mpitia: Koh Tonsay sy Sihanoukville ary ho azy ireo no hanokanay ny lahatsoratray anio. Raha liana amin'i Kambôdza ianao, dia mikasa ny hitsidika an'i Azia atsimo atsinanana ary manonofy an'ireo toeran'ireo paradisa ireo ianao, soraty ity fampahalalana ity.
2 Ny tontolon'ny Sihanoukville
Ny toerana voalohany dia Koh Tonsay, a nosy izay any amin'ny morontsiraka atsimon'ny Hoalan'i Thailand. Nosy Conejo izy satria izany no dikan'ilay anarana. Ho hitanao ihany koa ny anarana Kep Tonsay, fa raha ny marina dia manondro ny faritany io anarana hafa io.
Ny nosy efatra kilometatra monja avy eo amin'ny tanànan'i Kep izany ary kely sy tsara tarehy izy io. Amin'ny fotoana hafa anarana Kep-sur-mer no nahafantarana azy. ny fasika fotsy sy malefaka ny morontsiraka, toy ny vita amin'ny lafarinina totoina tsara. Milamina ny ranomasina eto ary tsy latsaka tampoka ny ranomasina fa miditra moramora ao anaty ranomasina ka Tena tsara ho an'ny milomano na mankafy hetsika rano na mandeha miaraka amin'ny ankizy.
Tsy io paradisa io foana akory. Nandritra ny roapolo taona dia nisy fonja niasa teto, saingy nikatona tamin'ny taona 1970 ary niadana tsimoramora, nanomboka teo dia nanomboka niova endrika ilay nosy ary nanomboka namboarina ny trano fandraisam-bahiny sy trano tsy miankina ankoatry ny fanorenan'ireo mpanjono kely.
nefa mbola tsy nokasihin'ny orinasa hotely lehibe na dia misy aza ny feo mandeha fa hamboarina ireo trano fandraisam-bahiny goavambe. Amin'izao fotoana izao dia mbola kely ary ho an'ireo mpanao kitapom-batsy, ohatra, ny trano bongo tena tsotra matetika. Tonga nandany ny tontolo andro ireo mpizahatany ary raha mijanona izy ireo dia manao izany mandritra ny roa na telo andro, farafaharatsiny ary mihoa-pefy.
Como adiny telo avy eo Phom Penh Misy aza fitsangatsanganana voalamina, fitsangatsanganana, tonga, mandany ny andro ary hiala amin'ny tolakandro. Raha mandeha irery ianao afaka tonga amin'ny sambo ianao avy any KepAntsasakadiny fotsiny ny dia ary miampita ny bay ianao ary tsara sy mahafinaritra ny mandeha an-tongotra.
Izy io dia ny mankafy ny morontsiraka fotsy madio, ny rano mangarahara, ny foza, zava-pisotro novidina tao amin'ny bara amoron-dranomasina, ny sasany aza manome anao farafara volotsangana handry, ary ireo dia an-tongotra izay anasan'ny tontolon'ny tany an-trano
Ala mikitroka, vohitra manam-pahaizana manokana amin'ny fanangonana sy fanamainana ahidrano, ary morontsiraka mamorona sary mahafinaritra. Nilaza taminao izy ireo fa afaka mandehandeha eran'ny nosy dia adiny iray Fa tsy maintsy manao kiraro ianao satria ny morony dia eny amoron-dranomasina, eny, nefa avy eo manjavona ny arabe ary miseho ny vato sy ny ala, vato, morontsiraka sy ala, morontsiraka, vatolampy ary ala. Toa lozabe lela io fa manova haingana ny tany nodiavinao mihalava kokoa ny diany ary maharitra maharitra adiny telo izany. Satroka, rano mineraly ary be herim-po be ihany no ilaina.
Ny tontolon'ny Sihanoukville
Raha Koh Tonsay dia nosy handany ny andro fa tsy zavatra hafa, Shianoukville Tanàna amoron-tsiraka izy io, renivohi-paritany, mavitrika kokoa. 232 kilometatra miala an'i Phnom Penh izany Ary afaka tonga amin'ny fiaramanidina ianao, amin'ny angidimby amin'ny sidina charter, tsy mora, amin'ny fiara fitateram-bahoaka izay maharitra adiny dimy, ao anaty taksibe izay manao dia mandritra ny telo ora ary ahafahanao mizara seza sy hitahiry vola. Tsy misy sambo na lamasinina. Eo amin'ny tendrony saikinosy iray eo amin'ny Hoalan'i Thailand izy io ary voahodidin'ny torapasika sy torapasika maro hafa.
Manoloana ireo morontsiraka ireo dia misy nosy kely tsy misy mponina, izay efa elaela no nanjary malaza andro fitsidihana ho an'ny tanora mpizahatany. Na dia tanàna iray tena mpanao raharaham-barotra aza, ny serananany dia ranomasina misy ny hetsika, Izy io dia toeram-pialofana, spaoro kilasy ambony ary mandray fiheverana sy fikarakarana be ny fizahantany.
Raha vao jerena, very ny hatsaran'ny fanjanahantany ny tanàna ary tambajotra amin'ny arabe midadasika sy goavambe izay atambatra amin'ny tranobe mavo maoderina, izay misokatra amin'ny faritra amoron-tsiraka. Ka, Raha sendra anao io dia andalovao, dia tsara kokoa ny manofa moto. Amin'izay fotoana izay ianao vao hahatratra ireo tranonkala mahaliana na manararaotra teboka panoramika sasany toa ny havoanan'i Wat Leu na ny fitoerana masina Yo Mao izay miaro ny morontsiraka.
Ny Hoalan'i Thailand dia seranan-tsambo anaty rano voajanahary ary malefaka ny toetrandro. Ny morontsiraka dia iray amin'ny perila ary afaka manisa maro isika ny morontsiraka tsara indrindra sy malaza indrindra ho an'ny mpizahatany:
Ochheuteal Beach: morontsiraka fasika fotsy telo kilaometatra ny halavan'ny masoandro, elo sy kioska, trano fandraisam-bahiny ary trano onenan'olon-tsotra.
Serendepity Beach: 600 metatra eo ho eo izy io ary malaza amin'ny vahiny tandrefana. Misy trano fandraisam-bahiny vitsivitsy eny amoron-dranomasina.
Otres Beach: morontsiraka efa ho dimy kilometatra ny halavany izay hita eo amin'ny faran'ny atsimo amin'ny morontsiraka voalohany izay notononinay anarana. Voaravaka hazo tamarind sy mandarin ary fasika fotsy izy io.
Independence Beach: Manana trano fandraisam-bahiny mitovy amin'ny anarany izy io, Hotel Independence, namboarina teo ambonin'ilay vatolampy misy endrika maritrano Kambodziana.
Victoria Beach: Morontsiraka be mpitia izy miaraka amin'ireo mpanao kitapom-batsy na dia tsy dia madio foana aza io.
Hun Sen Beach: azontsika atao ny milaza fa morontsiraka goavambe io, tsy misy namboarina.
Tany amoron-dranomasina no nilazanay izany misy nosy kely maromaro ary amin'ny sasany amin'izy ireo dia manana bungalow sy trano fandraisam-bahiny misy sokajy mpanelanelana na mahazatra izy ireo. Nosy fito, toerana fito mety hasiana habe samihafa, na dia kely aza.
afaka miresaka momba izany ve isika Nosy Koh Rong, sahabo ho 40 kilometatra miala ny Nosy Koh Pors, akaiky kokoa ary nilaozana na ny Koh Russei na Isla Bambú, ohatra. Ny tena marina dia manolotra be dia be ity toeram-pialana amoron-dranomasina ity: fitsangatsanganana ara-kolontsaina, fizaran-tany mahafinaritra, morontsiraka nofinofy, fiainana alina, fisitrihana, snorkeling ary ny fotoana hihaonana sy hifaneraserana amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Kambodza » Nosy sy morontsiraka Kambodza: ​​Kep, Koh Tonsay ary Sihanoukville
Raha ho anao ny morontsiraka tsara indrindra any Kambôdza dia ao amin'ny Rabbit Island, tsara kokoa ny tsy manohy mamaky ny pejinao.Raha mijery ny tripadvisor ianao dia hahita izay lazain'ny olona. Tany amin'ny nosy Rabbit aho ary tsara tarehy izy io nefa tsy mifaninana amin'i Kho Rong sy ny morontsiraka lava na amin'ny morontsiraka hafa. Andao handeha namana handehandeha kely kokoa
Ny lakile tsara indrindra any Kiobà